'Halloween Kills' dia hanao première amin'ny teatra, amin'ny Peacock the Same Day
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Halloween Kills' dia hanao première amin'ny teatra, amin'ny Peacock the Same Day
by Waylon Jordan Septambra 9, 2021
by Waylon Jordan Septambra 9, 2021 2,810 hevitra
Vaovao lehibe, Mpankafy Halloween! Mamono ny Halloween dia handeha amin'ny tambajotra streaming Peacock amin'ny androtr'io ihany ny famoahana ilay sarimihetsika. Navoaka tamin'ny vaovao samihafa ny vaovao tranokalam-baovao androany miaraka amin'ny kintan'ny sarimihetsika, Jamie Lee Curtis, mandray amin'ny media sosialy hanapariahana ny vaovao tsara!
Vaovao lehibe izany, mazava ho azy. Ny isa amin'ny boaty dia mbola tsy toy ny taloha talohan'ny areti-mandringana ary ny studio dia mbola miady mafy hamoaka ny sariny eo imason'ny mpankafy betsaka araka izay azony atao nefa tsy bankiridra tanteraka ao anatin'izany. Ny streamer dia manolotra ambaratonga famandrihana roa: $ 4.99 isam-bolana ho an'ny fijerena doka sy $ 9.99 isam-bolana handehanana tsy misy doka.
Mamono ny Halloween maka fotoana aorian'ny fiafaran'ny Halloween (2018). Laurie (Curtis) sy ny zanany vavy (Judy Greer) ary ny zafikeliny Allyson (Andi Matichak) dia nitsoaka an-katerena tamin'ny doro trano izay inoany fa namandrika an'i Michael Myers. Rehefa nentina haingana tany amin'ny hopitaly i Laurie mba hitsaboana ireo naratra mafy nahazo azy nandritra ny fifanandrinan'izy ireo, dia nitsoaka ilay afo ilay mpamono misaron-tava ary nanomboka namakivaky ny lalany hamaky an'i Haddonfield nefa nifanena tamina tarehy maro hafa aza tamin'ny lasa.
Peacock sy Blumhouse / Universal mazava ho azy, tsy izy irery no nanandrana tamin'ny varavarankely famoahana ireo horonantsary boaty lehibe nandritra ny areti-mandringana. Warner Brothers dia namoaka sarimihetsika marobe tao amin'ny HBO Max tamin'ity taona ity, ary hanao izany indray, rahampitso 10 septambra 2021, izay efa nandrasan'i James Wan fatratra mamohehatra.
Ao an-trano na any amin'ny teatra dia vonona izahay rehetra hahita ity toko vaovao ity ao amin'ny Halloween saga sy ny kalandrie ataontsika dia misy marika boribory mena mena lehibe manodidina Oktobra 15, 2021!